Ezi & Ezi Energy si Dubai | Usoro Ọhụrụ Anyị!
Ihe ngosi Dubai
Ezi & Ezi Energy si Dubai
Aha m bụ Sanni Gnankpe
Nwere ike 29, 2019
UAE na ngwa ngwa
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at Nwere ike 30, 2019
Site na Ngosipụta Ntaneti na Web ọhụrụ
Uplod CV maka naanị $ 5 - Inwere ike ịnweta ọrụ na UAE, Qatar ma ọ bụ Saudi Arabia
Ezigbo & Ezi Ike si Dubai
Dị ka anyị bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị na-enyere ndị mmadụ aka mgbe niile ma na-agbalị ịme ha ntakịrị na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ya mere, ụmụazụ anyị a hụrụ n'anya malitere ịza ìgwè anyị na otu oge, anyị na-enweta ume dị mma n'aka ha.
Ọwa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-ewu ewu na India, Pakistan na United Arab Emirates. Kwa ụbọchị ọtụtụ puku expats na-eziga akụkọ dị ịtụnanya na foto site na Dubai, Abu Dhabi ma ọ bụ ọbụna Sharjah.
Ozi nwere mmasi maka Ụlọ ọrụ Dubai City na ndi n’eso anyi. Naanị otu onye ọzọ mara mma jisiri ike zitere anyị Dubai & Positive Energy si Dubai.
Ka ọ na-ejikwa zipu otu n'ime foto anyị na Dubai. Obi dị anyị ụtọ ịde ha Online maka gị. Site na Ngosipụta Ntaneti na Web ọhụrụ.
Obi ụtọ na Dubai
Gọọmentị nke UAE na-achọsi ike ịkwalite obi ụtọ na Dubai. Na United Arab Emirates mba kwesiri inwe ahu ike na ahu ya na uche ya ka aru oru ma mee ka anwuru anuri nke Arab.
N’iburu nke a n’uche, Gọọmentị họpụtara onye minista na-enwe obi ụtọ ma wepụta mmemme mba maka obi ụtọ na ịdị mma. Yabụ, ndị mmadụ bi na Dubai ma ọ bụ na gburugburu ya ga-enwe mpempe ozi eji aka.
Tupu ị gụọ banyere mgbalị ndị a na ndị ọzọ na Dubai. Ị ghaghị ịchọta ntụziaka maka ịdị mma na Dubai. Ọzọkwa, n'ebe ahụ ị ga-achọta ozi gbasara ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ike gwụrụ gị n'ọrụ gị. Ma ọ bụ otu esi ehi ụra nke ọma ma jide n'aka na iji oge gị eme ihe n'ụzọ dị irè. Ya mere, ị ga-ezu ike ngwa ngwa, ị ga-enwekwu oge maka ndị enyi gị na ezinụlọ gị.
Dubai Ndị mmadụ na-achọsi ike, gọọmenti na obodo ndị ka ukwuu na UAE iji zụlite ịzụ ihe dị ka ụzọ ndụ na ime ka obi ụtọ nke mba ahụ dịkwuo ụba.
Nduzi maka Obi Ụtọ na Ahụhụ
Ebe E Si Nweta: https://government.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/happiness Ezi & Ezi Energy si Dubai
Gịnị mere o ji dị mkpa ka ị nọgide na-adị mma na Dubai?
Dubai bu onye uku ebe maka ibi ndu. Ugbu a, ebe a dị ịtụnanya na-erute maka ebumnuche dị elu karịa. Obodo Dubai na-aghọ a smart obodo. Expats, yana ụmụ amaala obodo, na-agbaso ọhụụ nke ịdị elu ya Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, osote onye isi ala na Prime Minister nke UAE na Ọchịchị nke Dubai, iji mee ka Dubai bụrụ ụdị ndụ obi ụtọ n'ụwa.
Ndị si Dubai ga-amalite itinye aka na ụlọ ọrụ gọọmentị. Ọmụmaatụ, Ịgba akaebe Dubai Fitness na njegharị obodo niile na ụbọchị pụrụ iche. Ihe omuma nke Dubai na-ekwu nke kachasi ike na-egosi na ndi bi anyi. Ndị ọbịa, azụmahịa ndị nwe, ndị nne na nna na ezinụlọ. Aghọrọ isi nkuku nke atụmatụ anyị. Iji ghọọ mba kachasị nwee ụwa.
Ezi & Ezi Energy si Dubai - akwụ ụgwọ: https://www.hw.gov.ae/
Obi Ụtọ Dubai-mbipụtadownload
Amazing Na-eduga na Obi Ụtọ na Dubai
N'agbanyegh i ihe i na-eme n 'a nd u, lee ot' ui si agbal i nweta ihe ịga nke ọma na UAE. N'oge na-adịghị anya ị ga-achọ ncheta dị mma.
Ịbụ onye dị mma ị chọrọ igosipụta. Ya mere, na nke a n'uche, gbalịa inweta onwe gị ma na-agba ọsọ ntakịrị kwa ụbọchị. Ọbụna oge nke 15 dị mma maka ahụ ike. Ọ ga - eme ka njirimara ike gị karịa 60% kwa afọ.
Malite na-agwa onye ị maara nke ọma okwu ọma. Ọfọn, ụzọ ọzọ na-eri nri kuki dị ụtọ. Ha ga - enyere gị aka ma ọ bụrụ na ị na - amalite inwe mmetụta nke ntakịrị. Ihe kacha njọ na-etinye n'àkwà gị ma na-eche banyere ihe dị njọ.
Mkparịta ụka ahụ nwere ike iwepụ ndụ gị. Ma ị na-achọ ma ọ bụ na ị bi na Dubai. Ya mere, ruo na njedebe, Gaa
Burj Khalifa hapụ ya ka ọ gaba. Mgbe ị na-enwe obi ụtọ na ya otu ụbọchị. N'ikwu okwu n'ozuzu, mkpebi ọjọọ gị niile ga - eme ka ị dịkwuo mma n'ọdịnihu. Dubai na-achọ ịghọ obodo obi ụtọ. N'ihi nke a, ị nwere ike inyere onye ọ bụla nke na-eche echiche ọjọọ aka.
Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ezi ugbu a nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka nke anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.
Maka asụsụ Sri Lanka
Ndị njem Turkey na Dubai
Maka ndị ahịa Indonesian
Nweta ọrụ dịka onye si Thailand
Maka ndị Uzbekistan
Ọrụ na Dubai maka ndị ọkà okwu Polish
Ndị na-ekwu okwu na Portugal na Dubai
Maka Bangladesh Expats
Ọrụ na Dubai maka ndị ọkà okwu Grik
Maka ndị Filipino na Dubai
Asụsụ French na-eduzi ndị na-ekpo ọkụ
Maka ndị Croatian na-ekwu okwu na Dubai
Ọrụ na Dubai maka ndị Russia na Dubai
Chọta ọrụ na Dubai si Spain
Ndị India bi na Dubai
Biko họrọ ụdị ọdịdị
Pịa ebe a iji mepee mpempe
Njikọ ndị metụtara ya
Njehie 12 nkịtị na-eme njem agaghị eme ka ị nọ na Dubai Metro
Ebe kacha mma iji gaa na njem nleta na Dubai na 2019
DUBAI: Ihe Nlereanya nke Ọganihu
Biko Banye ikwu okwu
Enweghị m obi ụtọ
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ!
Tiketi na-efe efe
Job na Dubai!
Enweghị ọganihu taa
Nweta ohere gị merie Job na Dubai!
Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwee ike itinye akwụkwọ maka ụlọ ọrụ Dubai Job Lottery! Enwere naanị ihe abụọ achọrọ iji ruo eru maka ọrụ UAE ma ọ bụ Qatar: Jiri Loba Visa Lottery chọpụta site na ịpị aka ole na ole ma ọ bụrụ na i tozuru etozu maka Visa na-ahụ maka Ọrụ. Ọpụpụ mba ọzọ ọ bụla, nke na-abụghị onye mba UAE, chọrọ visa nnabata iji biri ma rụọ ọrụ na Dubai. Anyị na lọtrị, ị ga-emeri nke a Mbinye aka ma ọ bụ biiti na-enye gị ohere ọrụ na Dubai!
O buru na i meriri oru na Dubai I kwesiri i debanye nkọwa gi.
Gị dere koodu bụ nti maka